Fitaovam-piadiana vaovao ho an'ny varavarana vy sy ny milina fanapahana laser-windows
Ny varavarana vy sy ny varavarankely nentim-paharazana dia mangatsiaka sy maloka. Ny singa hollow laser dia tafiditra ao amin'ny haingon-trano maritrano, izay mahatonga ny varavarana sy ny varavarankely ho miovaova hatrany, manome ny olona fahatsapana mahafinaritra! Ny milina fanapahana laser laser dia be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fanodinana vy ...
Manao ahoana ny mahomby ny fampandehanan'ny milina fanenan'ny tariby laser?
Mandritra ny fikarakarana ara-materialy sy ny famokarana, mba hahatratrarana ny fepetra takiana amin'ny famokarana vokatra, ny akora samihafa dia mila hokapaina ho famaritana manokana mba hahafahan'izy ireo ampiasaina amin'ny fizotry ny famokarana manaraka. Noho izany, ao amin'ireo indostrian'ny famokarana sy fanodinana ireo dia ilaina ...
Inona ireo fitaovana mety ho an'ny fanodinana ny milina fametahana laser fibre?
Ny milina fantsom-tariby fantsom-pahalalana malaza dia milina fanodinana malaza indrindra amin'ny taonjato faha-21. Noho ny habetsaky ny laminasa famolavolana sy ny fiasa mahery vaika, nampidirina tsikelikely ny indostria lehibe ny milina fibra laser.
Inona no mahatonga ny mazoto fibra laser fanapahana haingam-pandeha fametahana laser laser?
Ny safidy ny hafainganam-pandehan'ny milina fanoratana laser dia tena ilaina rehefa manapaka fitaovana. Raha miadana loatra ny hafainganana, na tsara toy inona aza ny vokany, dia hisy fiantraikany amin'ny famokarana izany. Raha haingana be ny hafainganam-pandeha fa ny sorona kosa sorona, somary be fatiantoka ihany izany. Raha ny marina, ny metal la ...
Inona no metaly azo tapahana amin'ny milina fanapahana laser vy
Ny fampivelarana ny siansa sy ny haitao dia hitondra fitaovana vaovao be dia be, ary amin'ny sehatra isan-karazany dia hisy fanampiana marobe azo omena, indrindra fa amin'izao fotoana izao fa fitaovana mekanika maro, koa satria nitondra fampandrosoana ny siansa sy ny haitao fandrosoana, ity dia ...
Maninona ireo mpanamboatra be dia be no manomboka manenjika milina fametahana laser fibre
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-06
Miaraka amin'ny fivoaran'ny siansa sy ny teknolojia ny haitao, dia miha haingana dia haingana kokoa ny hafainganan'ny olona. Amin'izao vanim-potoana fitadiavam-bola izao, ny fiainam-piainan'ny olona sy ny asa dia nanomboka nanenjika fahombiazana sy fahitana tsara, ary ny milina fametahana laser fibre dia afaka mifanatanteraka ny fahombiazana ambony sy ny fikatsahana amin'ny fomba ...
Inona no fototry ny fiasa miasa amin'ny milina fanidiana ny CNC
Ny milina fanapahana plastika CNC dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany ankehitriny ary lasa be mpampiasa kokoa. Betsaka ny mpanamboatra te hanova avy amin'ny fomba fanodinana nentim-paharazana mankany amin'ny fifehezana isa, hanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana ary hampihena ny vidin'ny asa, fa tsy mahazo ny fitaovana, wha ...
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny milina famahana laser, ny mpampiasa 50% tsy haiko!
Araka ny fantatsika rehetra, ny milina fametahana laser dia manana tombony tsy manam-paharoa amin'ny fametahana ny takelaka vy. Tsy hoe famepetra avo lenta ihany, fa manana fizarana haingam-pandeha sy tsy misy burrage koa. Afaka mahazo vokatra tsara izy ireo na manapaka lovia matevina na vilia manify, ary ireo fiantraikany ireo dia miaraka amin'ny laser c ...
Ny fahaiza-mikajy momba ny fampiasana milina Flame Cutame
Milina fanapahana lelafo metaly manana fahaizan'ny fanapahana vy mahery, ambany vidiny, ny fampiharana dia voafetra amin'ny vy vy ihany, fanapahana ravina lehibe, Shandong Buluoer Intelligent Technology Co., Ltd. dia matihanina fanapahana plastika CNC, milina fanapahana lelafo CNC D ...
Fantatrao ve ny lalàna mifehy ny milina famonoana vy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-03-23
Ny milina fanapahana vy dia manana hatevin'ny vy fanapahana fahaizana lehibe, ary ambany ny vidin'ny fanapahana, ka raisin'ireo mpanamboatra fanodinana vy maro. Shandong Buluoer dia misahana manokana amin'ny R&D, famokarana, varotra ary serivisy amin'ny fitaovana fanapahana laser, fitaovana fanamafisam-peo, CNC ...
Tandremo rehefa manapaka vy vy ny milina fametahana laser
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-01-06
Rehefa mampiasa fitaovana milina fanamainty laser dia malefaka tsara ny fantsom-bolo akaikin'ny fifantohana. Fantatrao ve ny fomba fametrahana ny masinina fanapahana laser? Ny dingana voalohany amin'ny fanapahana dia ny hahita toerana fifantohana tsara, izay lohahevitra izay mahaliana ny rehetra. First ...